Mpanamboatra kitapo - Mpanamboatra kitapom-batsy China, mpamatsy
Kitapo ho an'ny famolavolana lamaody Tigernu
Ity kitapom-batsy ity dia vita amin'ny polyester avo lenta, miaraka amin'ny haben'ny 31 * 15 * 48cm (L * W * H). Kitapom-batsy misy fahaiza-manao lehibe izy io, efitrano lehibe misy tanany finday mahazendana, paosy roa eo anoloana ary paosy roa. ampy ny efitranonao, ny telefaona, ny kahie, ny banky herinaratra, ny telefaona, ny tariby, ny karatra, ny peninao. Izy io koa dia manampy anao hitandrina tsara ny zavatra ataonao amin'ireo mpizara maro samihafa.
Ny kitapom-batsy dia mavesatra ary miaraka amin'ny fehikibo vita amin'ny rojo matevina, tena ahazoana aina na dia feno tanteraka aza.
Ity kitapom-batsy ity dia misy loko 3 misy, mainty, mavo, volondavenona, mety amin'ny unisex.
Kitapom-batsy tsara indrindra ho an'ny sekoly, ny ankizy, ny tanora, ny asa, ny komuter, ny dia, ny orinasa na ny fanomezana.
Tigernu fomba mahazatra ambaratonga kitapom-batsy tantera-drano
Ity haben'ny kitapom-bolan'ny sekoly ity dia 31 * 11 * 41cm (L * W * H), misy efi-trano iray lehibe sy fonon-tànana solosaina finday mety ho an'ny solosaina finday hatramin'ny 14 metatra, efitrano iray eo anoloana misy poketra kely, paosy harato roa ho an'ny tavoahangy sy elo. Malalaka ity kitapom-batsy ity ho an'ny boky, kahie, telefaona, banky herinaratra, tariby sns sns.
Izy io dia vita amin'ny polyester avo lenta ary misy loko 5 misy, mahafeno ny fepetra takiana.
TIGERNU kitapo fihinanam-bola tsy tantera-drano
Ity haben'ny kitapom-bolan'ny sekoly ity dia 30 * 18 * 47cm (L * W * H), misy efi-trano iray lehibe ary fehin-tanana misy laptop ho an'ny solosaina finday hatramin'ny 17inch, efitrano iray eo anoloana misy poketra kely, paosy harato roa ho an'ny tavoahangy sy elo. Malalaka ity kitapom-batsy ity ho an'ny boky, kahie, telefaona, banky herinaratra, tariby sns sns.
Izy io dia vita amin'ny nylon avo lenta. Ny zipper lehibe dia Tigernu patanty roa sosona azo zahana zipper roa, porofo mipoaka, mateza ary azo antoka. Izy io dia kitapo miady amin'ny halatra, manome fiarovana fanampiny amin'ny fiainanao isan'andro.
Ity haben'ny kitapom-bolan'ny sekoly ity dia 28 * 15 * 43cm (L * W * H), misy efi-trano iray lehibe sy fonon-tànana solosaina finday mety ho an'ny solosaina finday hatramin'ny 15.6inch, efitrano iray eo anoloana misy poketra kely maro, paosy harato roa ho an'ny tavoahangy sy elo . Ity kitapom-batsy ity dia malalaka ho an'ny boky, kahie, telefaona, banky herinaratra, tariby sns.
Vita tamin'ny oxford avo lenta izy io ary misy loko 3, mifanaraka amin'ny fepetra takiana samihafa. Ny zipper lehibe dia Tigernu patantera roa misy pataloha roa azo zahana zipper roa, porofo mipoaka, mateza ary azo antoka. ny fiainanao isan'andro.
TIGERNU mamorona kitapo ho an'ny mpianatra mahafatifaty voalohany ho an'ny ankizy
Ity kitapom-batsy ity dia tena mahafatifaty ary mety amin'ny ankizy kely.
• lanja maivana, safidy tsara ho an'ny ankizy
• fitaovana azo antoka, namana ara-tontolo iainana ary avo lenta, tsy mahazaka aretina ary tsy manimba
• fehezam-boaloboka matevina sy mihalalaka, ny famolavolana ergonomika dia manampy amin'ny fampihenana ny enta-mavesatra amin'ny tokony
• ny tontonana miverina tsara mifono spaonjy sy harato dia afaka mampitombo ny fikorianan'ny rivotra
• ny paosy sy ny kaontenera maro dia manampy amin'ny fitazonana ny fitaovam-pitaterana voalamina tsara sy mora hita
• esory ny tariby sy ny paosin'ny sisiny, mba hahatonga ny ankizy ho be taraina kokoa amin'ny alina
• loko roa misy, manga sy mavokely, safidy tsara ho an'ny ankizilahy sy ankizivavy
• ny ampahany mampidina rehetra dia manamafy, matanjaka kokoa ary mateza
Safidy tsara ho an'ny ankizy ho kitapo an-tsekoly.
Kitapo famoronana lamaody TIGERNU ho an'ny tanora
Fahafahana: ny kitapom-batsy dia volavolan-damaody misy habe 29 * 14 * 45cm (L * W * H) .Ny efitrano lehibe misy mpizara maro sy fonosana finday vita amin'ny kofehy vita amin'ny fehin-kibo 15.6 ″. Malalaka ihany koa ho an'ny ny zavatra ilainao isan'andro, boky, akanjo, banky herinaratra, finday sns. Ny efi-trano anoloana misy poketra mpaninjara maro dia manampy amin'ny fandaminana ny entanao, penina, kitapom-batsy, telefaona, tariby sns sns. paosy fanoherana ny halatra ho an'ny zava-dehibe.
Endri-javatra azo antoka: Ny kitapom-batsy dia vita amin'ny alàlan'ny splashproof & nylon mahazaka mateza, mateza ary maharitra. Ny takelaka roa sosona miendrika nify pataloha azo zahana mifono paty dia manome fiarovana bebe kokoa amin'ny dianao sy ny fiainanao andavanandro. Ny lamba afovoany manga sy volomboasary eo afovoany ho haingon-trano, mahatonga ny kitapom-bola ho lasa lamaody sy milay kokoa.
Endri-javatra: ny kitapom-bolam-barotra dia misy tadiny roa azo fehezina sy paosy miverina manome valisoa ho an'ny fampiononana mandritra ny diany. Ary ny fehin-tsoroka azo ovaina sy be paosy dia natao mba hahatonga ny kitapom-batsy hahazo aina na dia feno ny fitaovanao rehetra aza.
Kitapom-batsy ity dia kitapo ho an'ny mpianatra, mety amin'ny lehilahy, vehivavy, mpianatra na inona na inona tanjona. Kitapo kitapo TIGERNU tsara ho an'ny sekoly, oniversite, fialan-tsasatra amin'ny faran'ny herinandro, fitsangatsanganana tsindraindray, gym, asa isan'andro, orinasa, dia lavitra, fitsangantsanganana ary fitsangantsanganana. Tsara ho toy ny kitapo, kitapo an-tsekoly, kitapo mahazatra, kitapo finday.
Fahafahana: Ity haben'ny kitapom-batsy ho an'ny lehilahy ity dia 30 * 15 * 43cm (L * W * H), mety hatramin'ny laptop 15.6 inch. Ny efitrano lehibe dia ampy ho an'ny bokinao, finday, kitapom-batsy, telefaona, banky herinaratra sns. Ny paosy roa dia tsara ho an'ny tavoahangin-drano sy elo. Ny paosy zipper roa eo aloha sy ny paosy miady amin'ny halatra dia manome anao fidirana mora amin'ny entanao kely. Kitapom-batsy marobe izy io ary afaka mitazona ny filanao rehetra milamina.
TIGERNU kitapom-batsy dia mety amin'ny toe-javatra rehetra sy olona.